धर्म संस्कृति Page - 1| Mero Jyotish
श्रीस्वस्थानी व्रतकथाको त्रिंशोऽध्यायः, चन्द्रावतीद्वारा आफ्नो वृत्तान्तको वर्णन
त्रिंशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ-हे अगस्त्य मुनि! तिमी ध्यानपूर्वक सुन-त्यसपछि चन्द्रावतीले गोमा रानी र आफ्ना पति नवराज राजालाई प्रणाम गरिन् र नवराजले सम्मानसाथ बसालेर चन्द्रावतीलाई सोधे-हे स्त्री! मैले तिम्रो मुख नदेखेको आज यतिका वर्ष भइसक्यो। फेरि तिमीलाई ल्याउन भनी डोलेहरू पठाएको थिएँ, ती डोले पनि आजसम्म फर्केर यहाँ आएनन्। तिमीले पनि आउन ...
एकोनत्रिंशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ-हे अगस्त्य मुनि! त्यहाँपछि चन्द्रावतीले बगाएका आठ रोटीमा चार रोटी नागिनीले पाएर हातमा लिई यस्तो अपूर्व रोटी कसले बगाएछ, मेरा पति घर छैनन्। बाह्र वर्ष भयो कहाँ गए, पत्ता छैन। उनलाई नख्वाई एक्लै कसरी खाऊँ। उनको खबर गरूँ अनि दुई-दुई रोटी बाँडेर खाउँला भनी गण्डकी नदी, नाला सबै ...
श्रीस्वस्थानी व्रतकथाको अष्टविंशोऽध्यायः, चन्द्रावतीले गरेको श्रीस्वस्थानीको व्रतको वर्णन
अष्टविंशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ-हे अगस्त्य मुनि! त्यसपछि ती ब्राह्मणहरू भात लिएर चन्द्रावती भएको स्थानमा पुगे। चन्द्रावतीले तिमीहरू आएको देखी मलाई पनि केही ल्याइदियौ कि भनी सोधिन् र ब्राह्मणहरूले भने-'हे पापिनी! तँ अत्यन्त पापिनी रहिछस्। तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो। किनकि तँलाई दिन भनी हेर्न जाँदा राजाको भण्डार नै सुक्यो। यति ...
अथ सप्तविंशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ-हे अगस्त्य मुनि! त्यसपछि डोलेहरूले भने-हे महारानी! त्यहाँ स्वर्गका अप्सराहरूलाई स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका देखेर उनैका संसर्गमा हामी पनि पूजा गर्न लाग्दा केही विलम्ब भयो क्षमा गर्नु होला। हजुरलाई पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौं, लिनुहवस्। तिनका यस्ता कुरा सुनी चन्द्रावती क्रोधित भई राता-राता आँखा पारेर दाह्रा ...
षड्विंशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ-हे अगस्त्य मुनि! त्यसपछि एक दिन नवराजले आफ्नी माता गोमासित भने हे माता! स्वस्थानी परमेश्वरीका कृपाले हामी आजको यो स्थितिमा प्राप्त भयौं। अब हाम्रो राज्यमा भए। जति समस्त ब्राह्मणहरू डाकेर भोजन दक्षिणा दिऊँ। यस जन्ममा दान-धर्म गर्नसके अर्को जन्ममा प्राप्त हुनेछ। यति नवराजले भनेको सुनी-हे पुत्र! यो असल ...
पञ्चविंशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ-हे अगस्त्य मुनि! त्यसपछि लावण्यदेशमा मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुनको कलश र फूलको माला दिई राजा खोज्न लगाइराखेका थिए। लोकहरू अनेक वस्त्र अलंकार पहिरी राजा होइजान्छु कि भनी हात्तीको नगीच गएर अघि-पछि हिंड्न लागे। नवराज पनि पुगेर यौटा पाटीमा बसी हेरिरहे। हात्तीमा हरि-हर प्रवेश गरी नवराज ब्राह्मणका नगीच गई गलामा ...
चतुर्विशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ-हे अगस्त्य मुनि! त्यसपछि गोमा ब्राह्मणी धागाको लरिया लिएर चन्द्रज्योति नगरको बरहीको घर पुगेर- मेरो घरमा सप्तऋषि आएका छन् यो धागोको पान देऊ, तिनलाई खान दिन्छु भनिन्। त्यति गोमाले भनेको सुनेर बरहीले उत्तर दियो-हे गोमा ब्राह्मणी! पान त कत्ति पनि छैन, जो भएको हिजै बेचिसकें। नपत्याए हेर भनेर ...
त्रयोविंशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ-हे अगस्त्य मुनी! नवराज ब्राह्मण पिताको खबर गर्न गएपछि नवराजकी स्त्री चन्द्रावतीले सासू गोमासित भनिन्-हे माता! म माइत नगएको धेरै दिन भयो। यहाँ खान अन्न छैन, लगाउन लुगा छैन, अर्कासित मागेर मात्र कती दिन निर्वाह गर्ने? अत: म केही दिन माइत जान्छु। तपाईंले आफ्नू शरीर र घरको रक्षा ...
अथ द्वाविंशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ-हे अगस्त्य मुनि! शिवशर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी त्यहाँबाट हिंडेपछि शिवभट्ट र सतीले आँखाले देखिएसम्म हेरे। देखिन छाडेपछि वृक्षमा चढेर हेरे। जब वृक्षबाट पनि देखिन छाड्यो त्यहीं वृक्षको हाँगामा बसेर अनेक विलाप गर्न लागे। दैवसंयोग त्यसै बखत रूखको हाँगा भाँचिएर दुवै स्त्री-पुरुष वृक्षबाट लडेर मरे। तब श्री ...
अथ एकविंशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ-हे अगस्त्य मुनि! यस्तै प्रकारले जब त्यहाँ बसेको निकै वर्ष बितिसक्यो तब एक दिन शिवशर्माले आफू हृष्ट-पुष्ट भएको देखेर घर सम्झी अब यहाँ कति बस्ने, बरू घर जानुपर्यो भन्ने विचार गरी शिवभट्ट र सती कहाँ नगीचै गएर, भने-हे माता-पिता! तपाईंहरूको कृपाले कन्यादान पाई म कृतार्थ भएँ। म ...
श्रीस्वस्थानी व्रतकथाको विंशोऽध्यायः, गोमाको विवाहको वर्णन
अथ विंशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ-हे अगस्त्य मुनि! त्यसपछि भिक्षुकरूप महादेवको श्राप पाएकी गोमा चिन्तित भएर रुन लागिन्। केही बेरमा गंगास्नान गर्न गएका माता-पिता हरि-हरको पूजा गरी सुवर्णादि अनेक द्रव्य दान गरी घर आए। अनि गोमालाई रोइरहेकी देखेर हे गोमा! किन रोएकी? के भयो? भनी सोधे। तब गोमाले भनिन्-हे माता-पिता! हजुरहरू गंगास्नान ...
एकोनविंशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ-हे अगस्त्य मुनि! तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यति पातालका कुरा सुनाएँ। अब मर्त्यमण्डलको कुरा भन्दछु। पूर्वकालमा मर्त्यमण्डलको दक्षिणभागमा ब्रह्मपुर नामको यौटा नगर थियो। त्यहाँका कर्मिष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाई वेद-पुराणादि शास्त्र अध्ययन गरेर आफाफ्ना धर्म-कर्मको पालन गरेर बसेका थिए। त्यहीं यौटा शिवभट्ट नामका अत्यन्त (दीन-दरिद्र ब्राह्मण थिए। गरीब भए ...
अष्टादशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ-हे अगस्त्य मुनि! त्यसपछि महादेवले विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरसित युद्ध गर्न लाग्नुभयो। महादेव र जालन्धरको भयंकर संग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हरण गरिसकेका हुनाले जालन्धर शक्ति क्षीण भई महादेवसित युद्ध गर्न नसकी आकाशमा गएर माया-युद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाश मै गएर युद्ध गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि जालंधर ...
सप्तदशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ-हे अगस्त्य मुनि! त्यसपछि महादेव राजहंसहरूका राजा भएर मानसरोवरमा अनेक हंसका साथ जल-क्रीडा गरिरहनु भएको थियो। त्यही अवसरमा विष्णुलाई ठूलो वेगले आएको देखी राजहंसरूप महादेव भन्नुहुन्छ-'हे विष्णु! यस्तो वेगले मकहाँ के काम परेर आयौ? तिमीलाई के कष्ट आइलाग्यो भन। यति महादेवको वचन सुनी विष्णु गरुड़बाट वर्ली दण्डवत् प्रणाम ...
षोडशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ-हे अगस्त्य मुनि! ध्यानपूर्वक सुन-फेरि कुनै दिन शिवजीलाई वन-विहार गर्ने इच्छा भयो र कसैलाई पनि थाहा नदिई श्लेष्मान्तक वनमा मृग-स्वरूप भई अनेक मृग-मृगीहरूका साथ परम आनन्दले रहन लाग्नुभयो । यता पार्वतीले महादेवलाई नदेखी अनेक स्थानमा खोजिन्, तर कहीं भेट्टाउन नसकी-महादेवले अघि पनि मलाई यसै गरी दुःख दिनुभयो, अब ...
पञ्चदशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ-हे अगस्त्य मुनि! एक दिन पार्वतीले बुकुवा धस्ता निस्केको मयलले मूर्ति बनाई द्वारमा पाले राखेकी थिइन्। महादेव बाहिरबाट आएर भित्र जान खोज्दा त्यस मूर्तिले जान दिएन र त्यससित युद्ध गरी त्यसको शिर छेदन गरी भित्र जानुभयो। अनि पार्वतीले महादेवसित 'द्वारमा कोही बसेको थिएन?' भनी सोधिन् र महादेवले 'त्यसको ...
चतुर्दशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ-हे अगस्त्य मुनि! त्यसपछि पार्वतीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद आठ रोटी, आठ अक्षता, आठ वेलीपुष्प, आठ पान, आठ कुड्का सुपारी सगुन समेत-हे स्वामी! अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो। बालक कालदेखि हजुरलाई धाइरहेकी, बल्ल इच्छा पूर्ण भयो भनी महादेवका हातमा प्रसाद दिई साष्टांग प्रणाम गरिन् र हे आदि पुरुष! ...
श्रीस्वस्थानी व्रतकथाको त्रयोदशोऽध्यायः, पार्वतीको विवाहको वर्णन
त्रयोदशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ-हे अगस्त्य मुनि! त्यसपछि पौषशुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र पार्वतीले श्री विष्णुको उपदेश अनुसार सखी समेत भई हात-खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भइ एकभक्त रही एकचित्त गरी नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन पूरा भयो र माघशुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री ...
श्रीस्वस्थानी व्रतकथाको द्वादशोऽध्यायः, श्रीविष्णुद्वारा पार्वतीलाई स्वस्थानी व्रतको उपदेश
अथ द्वादशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ-हे अगस्त्य मुनि! त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाई अत्यन्त हर्षपूर्वक आफ्नो मर्यादा अनुसार उचित कर्म गरिदिए। दस महीना पूरा भएपछि मेनकाको गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्। ती कस्ती कन्या थिइन् भने-हजार सूर्यको तेज जस्तै तेज भएकी, रक्तवर्ण र कोमल अंग एवं परम सुन्दरी, ...
एकादशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ- हे अगस्त्य मुनि ! तहाँ उप्रान्त सतीदेवीको प्रत्येक अंग पतन भयो र महादेवले चित्त दृढ पार्न नसकी हा सती ! भन्दै भूमिमा ढली मूच्छा परे। निकै बेरणछि होश आयो र लामो-लामो सास फेरी चित्तले सतीलाई नै सम्झी बौलाहा जस्तै जताततै डुल्न लागे। त्यस्ता तरहले महादेव हिंडेको देखी ...